Fitoviana amin'ny fiainana andavanandro ny taboo? | Saripika sary maimaim-poana ho an'ny download
Fitoviana amin'ny fiainana andavanandro ny taboo?
2. Mankanesa ao amin'ny trano
Ny fitanjahana - ho an'ny sasany dia ara-dalàna, fa ny hafa kosa menatra sy misoroka azy ireo. Tsy ny rehetra no sahy manatona fakàna fialan-tsasatra ho an'ny fialan-tsasatra, miala sasatra ao anaty sauna na eo amoron-dranomasina. Nahoana anefa izy io?
Lohahevitra momba ny Taboo amin'ny fiainana andavanandro
Na dia teraka tsy manan-kialofana aza isika dia olona vitsy no voataonan'ny ray aman-dreniny ary angamba ny fivavahany, fa tsy manao na inona na inona.
Fitoviana amin'ny fiainana andavanandro - tsy mitafy ny tranonao?
Ny sasany dia menatra satria mieritreritra izy ireo fa tsy manana endrika tsara. Mety ho fahatsiarovan-tena tsara ihany koa izany, izay te ho hita.
Ireto misy soso-kevitra vitsivitsy hanampiana anao hanandratra ny fizakan-tena na hanalanao ny foto-kevitrao amin'ny maha-veterana anao.
Afaka manomboka amin'ny matory mangina ianao. Ny fahatsapana ny vatany irery dia azo atao araka izay azo atao amin'ny mpivady. Ny vokatra tsara dia tsara, indrindra amin'ny fahavaratra, dia ny tsy hitondranao akanjo izay hafanana moka.
Na iza na iza ao an-trano ary tsy voatery mandeha miasa, any amin'ny toeram-pivarotana na fanendrena dia afaka mandeha tsy manan-kialofana any an-trano ary mendrika, ohatra. Na mametraka lamba rongony kely eo amin'ny sofa, mipetraha eo amboniny ary miala amin'ny boky. Azonao atao ihany koa ny mijery ny tenanao eo anoloan'ny fitaratra na ny dihy fotsiny eo anoloany miaraka amin'ny mozika.
Raha efa mipetraka ianao, dia azo atao koa ny misakafo tsy misy akanjo. Ankoatr'izany, ny sakafo dia azo amboarina eo ambony latabatra mialoha. Raha mpivady ianao, dia manana fahafahana hanatsara ny fiainam-pitiavana miaraka amin'ny crème crème, strawberries ary crème, ohatra.
4. Sunbathe mitanjaka
Mahafinaritra tokoa raha mipetrapetraka tsy misy akanjo na akanjo hafa. Ny fametahana tsy misy fotony, raha tsy miala amin'ny vatana mangatsiaka, dia azo atao ohatra ao amin'ny saha misy anao, raha tsy mahita izany ny mpiara-monina na miaro ny tenanao amin'ny rindrina na ny elo amin'ny fijeriny. Raha tsy misy zaridaina manokana na te hiditra any amin'ny farihy iray ianao, dia tokony hitady ny tora-pasika amin'ny aterineto, izay azo atao ny fiparitahan'ny masoandro. Raha toa ianao tsy sahy ny mipetrapetraka tanteraka amin'ny vehivavy, dia afaka miezaka aloha ianao fa tsy mipetraka amin'ny masoandro. Avy eo dia iray amin'ny fotoana vitsy manaraka dia mbola azo atao ny mamela tanteraka ny akanjo.
Aorian'ny filentehan'ny masoandro, milomano tsy misy akanjo. Eto ianao dia afaka mahatsiaro tena sy mafana mafana.
Raha mivoaka avy ao amin'ny dobo na ny farihy ianao, dia ho faly hahita fa tsy misy kitapo mipetaka eo amin'ny hoditra, izay tsy maintsy miova aloha, na inona no tsy maintsy miova ankehitriny, fa ny bikini maina na ny sigara no manjono. Ankehitriny dia azo atao ny maina na mivoaka amin'ny masoandro mandra-pahasitrany.
6. Mangina ny orana
Noho izany dia mila toerana izay tsy misy olona mahita anao, toy ny ao amin'ny zaridinao manokana, any amin'ny zaridaina na eny amin'ny farihy. Raha tsy mangatsiaka ianao ary avy eo dia mahazo orana mafana mandritra ny lohataona, dia mety ho tsapanao ny vatanao sy ny vatanao.
7. Makà sary maloto
Saika ny finday rehetra dia efa manana fakantsary androany. Na ny iray dia maka avy hatrany ny fakantsary avo lenta ho azy. Misy ny fahafaha-manao ho an'ny antony. Ohatra, nipetrapetraka teo am-pandriana ianao na teo am-pandriana. Azo atao ihany koa ny mametraka ny fakantsary eo amin'ny satroka, ohatra ny handroahana na hihira ny pianô ary ny sarimihetsika amin'ny alalan'ny fampiasana ny fahaleovan-tena. Izay rehetra manana namana dia te-hanaitra azy ireo, ohatra amin'ny kalandrie iray izay ahitana ny sarimihetsika nalain'izy ireo manokana, dia afaka mijery sary studio ihany koa. Na miara-mijoro na manoloana ny namanao ianao.
Nefa mitandrema amin'ny sarimihetsika ngezahana - mifampitady. Hetsika mampidi-doza!
Noho izany dia tsy sarotra ny manao zavatra tsy manan-danja. Tsy maintsy maka ny dingana voalohany, izany hoe, sahy. Raha vao mandresy an'io fihenana io ianao dia afaka mahatsapa ny vatany mahafinaritra ary mahatsiaro maimaimpoana tsy misy akanjo.
Na izany aza, na dia ny vehivavy miaraka amin'ny sipany sy ny lehilahy miaraka amin'ny namana aza dia afaka manao ity fanandramana mitaona ity, raha tsy manahy irery. Fotoana vitsy monja anefa, maro no mahatsapa fa ny fitanjahana dia tsara tarehy ary miha-matso hatrany ary matetika no tsy mitafy lamba.
Fanaovana fitsaboana amin'ny fiainana andavanandro
Fiainana ara-tontolo iainana sy maharitra eo amin'ny fiainana andavanandro
Inona ny politika - Nahoana no misafidy iray ...
Inona no tononkalo? Literatatra famakiana boky
Famerenana - hanavao ny trano taloha
Fampakaram-bady - Izany no mahatonga ny fampakaram-bady ho lasa fahombiazana
Fitsaboana - Manana birao eo anoloan'ny lohanao